Ilay tetika saiky namonoana ny filoha | Hevitra MPANOHARIANA
Ilay tetika saiky namonoana ny filoha
2007-05-09 @ 16:49 in Politika
Efa manomboka mivoatra tsikelikely ihany ny fanadihadiana momba ilay fanonganam-panjakana saiky notontosain’ny sasany tamin’ny alina mialoha indrindra ny fitsapa-kevi-bahoaka farany teo iny. Isika mahatadidy fa folo andro taorian’ny andro saika hanaovana ny hetsika indrindra no nilazan’ny praiminisitra io raharaha iray io. Tamin’izany fotoana izany dia tsy nisy nino ny ankamaroan’ny olona. Noheverina ho « sarimihetsika » nambara fotsiny izy io hanodinana ny resaka izay somary efa nihamafana tamin’izany fotoana izany. Moa ilay andro koa Zoma faha-13n’ny volana. Nanomana hamoaka fanambarana indrindra ny mpanohitra tamin’izay fotoana izay.
Avy eo ny gazety iray amin’ny teny malagasy no nahitana ny paik’ady saiky natao tamin’io fotoana io. Ny nambara moa dia hoe saiky hotifirina ny tafondro hatrety ampita (Ambatovinaky) ny trano misy ny filoha Ravalomanana. Izaho manokana dia tsy nino io fomba fitantara io. Ny lafintrano aiza moa no tena kendrena amin’ny tafondro ? azo itokiana ve fa tena ao tokoa ny filoha Ravalomanana amin’ny ora hanapoahana izany tafondro izany ? Heverina anefa fa tetika hivoahan’ny marina avy tamin’ny gazety taratra ihany io fitantarana somary kinanga io. Na izany aza dia misy ny lafiny azo heverina ho marina tao anatin’ny lahatsoratra dia ny filazana fa tsy nitovy ny vola raisin’ny tsirairay tao anatin’ny fanomanana fa ny tena miasa mafy indray no kely vola raisina indrindra. Nanindry bokotra fotsiny manko ny hafa nefa te-hisilaka vola bebe kokoa noho ny hafa. Io fitiavan-tena diso tafahoatra io rahateo no mety ho nampandamoka ny tetika rehetra.
Manana loharanom-baovao ihany koa aho, saingy mbola anjarantsika ihany koa ny mamakafaka na izy ilay tantaraiko etoana na tsy izy ihany koa. Efa ela no nahazoako azy ity saingy tsy te-hamoaka azy mihitsy aho noho ny fanadihadiana mbola mitohy. Na izany aza efa fotoanany angamba izao hamoahana ny tetika nomanina.
Ny mpandray anjara dia miaramila avokoa ary azo heverina fa ao amin’ny vondro-tafika mpiaro manokana ny filoha ihany na manana fifandraisana akaiky amin’ny vondro-tafika miaro ny filoha. Ny fotoana dia amin’ny alina mazava loatra ary mandritra ny fotoana fisafoana ireo mpiambina ny filoha. Tsy amin’ny alalan’ny fidirana amboletra, araka izay efa naely ombieny ombieny, fa tena amin’ny fomba tsotra mihitsy. Tonga eo amin’ny vavahady dia miarahaba ny mpiambina sy manatsafa. Mazava loatra fa tsy maintsy misy manamboninahitra ambony ao anatin’izany mpisafo izany. Avy eo milaza fa hisafo ny tanàna manontolo sy hijery ny manodidina. Amin’io izany dia ny lehibe no tena miresaka. Manana olom-pehezina manaraka azy ireo lehibe ireo na dia izany aza. Amin’izany fotoana izany tsy misy fandrarana hoe tsy mahazo mitondra fitaovam-piadiana satria sady miaramila ireo no mpisafo rahateo.
Rehefa tafiditra anatiny tsara dia anjaran’ny olom-pehezina sisa no mampiasa ny basiny indrindra fa rehefa akaiky ny filoha ka tsy afaka ny hiraty ny tifitra mihitsy (eto aho dia mieritreritra hoe raha tena nitifitra tokoa ranamana na ry zalahy dia ilay na ireo lehibeny nitarika azy ihany no nitifitra azy na azy ireo voalohany ). Teo indrindra no mety ho mailo tampoka ireto olom-pehezina no tsy nanatontosa ny andraikiny intsony. Ny baiko moana mety ho nisy fa ny hiteny ny baiko tsy ho azon’ireo lehibe natao mihitsy. Mety ho nifampiandry kendri-tohina ry zalahy samy « mpanafika » dia samy tsy nahavanona. Tsy ho andraikitry ny lehibe mihitsy manko ny hitifitra avy hatrany ny filoha fa ry zalahy olom-pehezina ihany no tokony ho nanao izany. Iretsy anefa tsy nety nanatanteraka ny baiko efa nifanarahana mialoha. Farany, andao andeha hivoaka sisa no vita. Rava maina teo ny tamin’iny.
Tezitra iretsy lehibe ka nampihorohoro an-dry zalahy madinika moa ireto farany matahotra ny ainy sy ny an’ny vady aman-janany koa naleony nitono-tena tamin’ny manampahefana sady nitantara ny tetika rehetra. Izany hoe nety dia nety ny tetika fa zavatra roa no mety nampiahotra ny mpanatontosa farany. Na dia tena resaka ara-bola araka ny nambara tokoa na tsy natoky tampoka ny amin’ny fomba ivoahana ny toerana tsy maninon-tsy maninona ry zareo. Mety ho misy koa antony hafa, mbola tao ny Fanahy Masina hoy ny mpivavaka kristiana, saingy tsy mahita intsony aloha izaho manokana. Marihiko farany fa io ny an’ny loharano azoko. Tsy voatery ho diso io nefa tsy voatery ho marina ihany koa. Ilay fizotry ny tetika sy antony mety ho nampandamoka azy ihany ireo nambarako ireo.
tetika hamono filoha
misaotra an'i jentilisa foana fa rehefa avy ao @ tribune,... aho dia miditra blaogy hijery vaovao jentilisa.
Ny mahavariana ahy fotsiny (sy mahaliana ahy ihany) dia mbola tsy ampahafantarina foana ve hatrizao ny anaran'ireo ati-doha niketraka (toy ny t@ andron'i Gal Fidy)?
Soa fa nisy ianareo namako, (ry Jentilisa), hoy i Rossy izay, fa ny vaovao mila "source" maro manko
Nampidirin'i ikalamako @ 22:18, 2007-05-09 [Valio]
Nahoana tokoa no tsy avoaka ny anaran'ireo voarohirohy na iza izy na iza ? Tsy voatery hiandry fanamelohana anie izay vao azo avoaka ny anaran'ireo olona. rehefa vita ny fitsarana dia miavaka hoa zy eo izay meloka sy izay tsy meloka kanefa tsy misy tokony hanakanana ny ahafantarana nya naran'ireo izay mandalo enkety.
Ary aiza izay fanazavana an-gazety milaza ny antony tsy ahazoana ireo anarana ireo ? tys midika anie izany hoe misalovana ny asan'ny Fitsarana akory.
Nampidirin'i prize @ 12:39, 2007-05-10 [Valio]